European Cockpit Association: Ryanair na usoro esemokwu, ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » European Cockpit Association: Ryanair na usoro esemokwu, ọzọ
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Ireland • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nke a ga-abụ oge ọkọchị nke abụọ nke ọgba aghara ụlọ ọrụ n'usoro maka Ryanair na isi ihe kpatara ya yiri ihe yiri ya, ma mara nke afọ gara aga: enweghị ike Ryanair ịme ezigbo mkparịta ụka mmekọrịta ya na ndị ọrụ ya.
"Otu afọ zuru ezu maka Ryanair inweta na ịzụlite ụgbọ elu ọhụrụ abụọ - Malta Air na Ryanair Sun na Poland - na ịzụta nke atọ - Laudamotion na Austria," European Cockpit Association Secretary General (ECA) Philip von Schöppenthau. “Mana n’oge a niile Ryanair enweghị ike iso ndị ọrụ ya dị iche iche ogologo oge enwee olileanya maka Nkwekọrịta Ọrụ Mkpokọta (CLA). O doro anya na imeziwanye mmekọrịta nke ndị ọrụ ya yiri ka ọ gaferela n'ọnọdụ dị ala na ndepụta kacha mkpa. ”
N'ime ọnọdụ dị oke egwu nke ọgba aghara ọha na eze, Ryanair yiri ka ọ họrọla ọzọ maka ụzọ kachasị amasị ya: esemokwu. Companylọ ọrụ ahụ nyere ịdọ aka ná ntị banyere mbelata ọrụ, mana ole na ole na ụlọ ọrụ ahụ kwenyesiri ike site na izi ezi nke ụgbọ elu ahụ nyere. Ihe iyi egwu dị iche iche na - echetakarị nke afọ gara aga, emere ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri 100 Irish pụọ. Agbanyeghị, site na mmemme na-efe efe n'ọdịnihu nke buru ibu karịa afọ a, ọbụlagodi na mbubata oge nke 'uto' ụgbọ elu 737 MAX, na njikwa na-aga n'ihu na-ewe ndị na-anya ụgbọelu, o siri ike ịhụ ịdọ aka na ntị na-agbanwe mgbe niile nke njupụta ụgbọelu dị ka ezigbo.
Onye isi ECA, Jon Horne na-ekwu, sị: “Ọ bụghị ihe ijuanya a ịdọ aka ná ntị a site na Ryanair. “Ihe iyi egwu ọhụrụ a na-echetakwara m mmechi nke Eindhoven base– usoro mmegwara megide ndị ọkwọ ụgbọ elu na ndị ọrụ ụlọ na iku ọrụ. Nke a yiri ka ọ bụ naanị ụzọ a ga-esi nweta okwu ụlọ ọrụ nke ndị ọrụ ugbu a maara. ”
Ryanair na-ekwu na oge ha na ndị ọrụ dị iche iche na-arụsi ọrụ ike bụ ihe ịma aka, ebe ndị ọrụ si mba dị iche iche na-enye nkwado ugboro ugboro iji zukọta iji kwurịta ihe ndị metụtara CLA, wee si otú a mee ka ụlọ ọrụ ahụ dịkwuo elu. Kama nke ahụ, Ryanair họọrọ mpekere mpempe akwụkwọ wee malite usoro mkparịta ụka yiri nke ya na ndị ọrụ dị iche iche - ndị ọrụ ụlọ na ndị ọrụ ụgbọelu - n'ọtụtụ mba EU ebe ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ. Nsonaazụ ruo taa bụ naanị ndị ọrụ ịnya ụgbọelu 3 na Europe (,tali, Belgium na Portugal) abanyela aka na CLA zuru oke, na-ahapụ ọtụtụ puku ndị ọrụ Ryanair gafee Europe ka na-enweghị nchebe na usoro, ọnọdụ na itinye ikike ndị ọrụ n'ọrụ.
Ihe karịrị otu afọ gara aga Ryanair kwere nkwa itinye iwu iwu mpaghara, iji kparịta ndị CLA niile bara uru maka ndị ọrụ ya niile, wee maa ọkwa na ọ ga-ekwe omume maka ndị ọrụ onwe ha / ndị ọrụ ngo ga-arụ ọrụ ozugbo. Emezubeghị nkwa a.
"Nkwekorita ndi a na ndi oru na ihe ndi ozo (dika na okenye) nke Ryanair rutere n'oge ikpeazu zuru ezu iji zụta ugbo elu oge, mana ejighi ya iji nweta udo ulo oru na-adigide na ọdịnihu na-adigide maka ụgbọ elu ahụ. Ihe iyi egwu na-adịghị mma ndị ọrụ na izu gara aga, na nwute, bụ ihe ngosi ọzọ nke enweghị nlebara anya nye ndị ọrụ ya na mkparịta ụka mmekọrịta. Ọ nlekọta ụlọ ọrụ amatabeghị ihe ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụ naanị ihe na-eguzogide ọgwụ na ezigbo mgbanwe?
"Site na ndepụta nke ohere ọdịnihu maka ịchụpụ ndị mmadụ na ịchụpụ mmadụ na Malta Air na Ryanair Sun, ọ bụghị ihe ijuanya na ndị ọkwọ ụgbọ elu na-ebili iji hụ na a ga-asọpụrụ nkwekọrịta ha, ikike ọrụ, na nkwa ndị mbụ sitere na ụgbọ elu ahụ," ka a na-ekwu. ECA Onye isi ala Jon Horne.